JW Library App: Kudhaunirodha Uye Kushandisa maBhaibheri (Windows) | JW.ORG Rubatsiro
Nechekumusoro kwescreen, baya pakanzi Bible kuti uone mabhuku eBhaibheri.
Baya pakanzi Bible, wozobaya bhatani rine mitauro kuti uone maBhaibheri. Baya panenge paine tumadot paBhaibheri raunoda kubvisa, wobva wabaya Delete.
Izvi zvakatanga kushanda muna March 2015 paJW Library 1.4, iyo inoshanda paWindows 8.1 zvichikwira. Kana foni yako kana tablet isiri kubudisa izvi, ita zviri munyaya yakanzi “Tanga Kushandisa JW Library—Windows,” pamusoro wakanzi Wana Zvitsva Zvinenge Zvabuda.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kudhaunirodha Uye Kushandisa maBhaibheri​—Windows